”Ninku xittaa Finland xafaayadda waa beddelaa” - Asylum in Finland
”Sharciga Finland waa fiican yahay, si gaar ahna dumarka ayuu u fiican ayah”, naag Ciraaq ka soo jeeda oo Finland deggan ayaa sidaas tiri.
”Finland naagtu waxey xornimo la mid ah tan ninka ku sameyn kartaa arrimo la mid ah kuwa ninku sameeyo: waxbey baran kartaa, shaqo ayeey aadi kartaa waxeyna ku hiwaayadeyn kartaa meeshi iyo waqtigi ay doonto”, ayeey hadalkeedi ku sii dartay.
”La yabaa ayeey fikrad ahaan la noqon kartaa ragga soo-galootiga ah in naagaha soo-galootiga ah ay kula dabaalan karaan hoolalka dabaasha dadka kale, laakiin sidaas ayaa halkan ka jirta.”
Finland marka ay naagtu ku labisato dhar jirkeeda looga jeedo uma siineyso fasax ninka in uu iyada u dhowaado.
”Finland dumarku waxey u labistaan sidii ay doonayaan. Dharka jirka looga jeedana xittaa ma ahan in loo arko wax xun ama galmo la xiriira. Waa wax caadi ka ah Finland waana in lala qabsadaa”, nin Afghanistan ka soo jeeda oo in ka badan toban sano deganaa Finland ayaa xusuusinaya dadka.
”Sinnaanta waa la damaanad-qaaday”
Naag Ciraaq ka soo jeedda ayaa sheegtay in Finland ay tahay meel u wanaagsan in ay dumarku yimaadaan, laakiin ragga uma ahan marwalba. Dhaqankan waa mid ka duwan marka la barbardhigo wadamo badan oo Bariga Dhexe ama Afrika ku yaal.
”Finland sinnaanta jinsiga waxaa lagu qoray dastuurka. Haddii naag, haba ahaato xaaska aad qabtee aad u geystato rabshad ama kufsi, waxaa laguugu oogayaa dacwad, ganaax ama xarig”, sidaas ayeey tiri waxeyna ku sii dartay:
”Wadamo badan sidaas kama jirto, soo-galooti badanna waxey u maleeyaan in ay u dhaqmi karaan sidi ay wadankooda ugu dhaqmi jireen. Maya, Finland maxkamad ayaa lagu saarayaa.”
Waxey u qabataan hoosadaha la qabsashada dadka soo-galootiga ah. Mid kamid ah moduucyada ugu muhiimsan waa sinnaanta jinsiga. Waxaa dhegeysanaya ragga doonaya in ay joogaan islamarkaasna bartaan habka ay Finnishku u fikiraan.
”Waxaan arrinta ugu sheegnay afka Carabiga. Ragga qaar waa tageen sababtoo ah ma dooneyn in ay dhegeystaan naag ka hadleysa sinnaanta. Waxey dib ugu laabteen dalkoodi ama dalal kale.”
Waxey iyadu qabtaan in la aqbalo habka ay u arkaan Finnishku sinnaanta, haddii la doonayo in lagu noolaado Finland.
Wadajir ayaa hawsha guriga loo qabtaa
Qaninimada dhaqaale iyo waxqabad ee Finnishku waxey ku saleysan tahay in ninka iyo naagtu ay shaqeeyaan oo ay wadajir lacag u soo geliyaan qoyska. Sidaas darteed ayeeyna hawsha guriga wadajir ugu qeybsadaan.
”Finland ninku wuxuu sameystaa cuntadiisa. Finland ninku xittaa waa in guriga nadiifiyaa soona adeegaa”, nin Soomaaliya ka soo jeeda ayaa sidaas yiri.
”Raggu waxey u arki karaan in uu doorkoodu ku beddelmay Finland. Raggu waxey u maleeyaan in ay qiimo dhaceen, maadaama aysan wax walba amri karin sida guriga oo kale. Laakiin Finland dumarku kama sareeyaan ragga, waa isku qiimo oo waa siman yihiin”, naag Ciraaq ka soo jeedda ayaa sidaas caddeynaysa.
Raggu xittaa Finland carruurta waa xannaaneeyaan. Inta badan aabaha iyo cunugguba waa ku raaxeystaan.
”Cuntada ayaan karinaa, waa la cunaa, xafaayadaha ayaa la beddelaa hawshana waan qabanaa, yacni mushaar la’aan ayaa shaqo culus la qabtaa! Soomaaliya waa shaqada dumarka oo uusan xittaa ninku si kama ah sameynin”, nin Soomaaliya ka soo jeeda ayaa sidaas yiri isagoo qoslaya.
qoys dhaqaalaha nolosha shaqo waxbarasho